Zvinonzwisisika here kubhadhara Amazon mazano ekutsvaga?
Vatengesi paIndaneti vane ruzivo rwebhizimisi re-e-commerce vanowanzotarisana nezvinetso pavanotanga zvigadzirwa kuAmazon. Sezvaunoziva, dzidziso yacho yakasiyana nemuitiro. Ndicho chikonzero nei kazhinji kusina kukwana kudzidza dzidziso kubva kuAmazone mazano uye zvidzidzo. Iwe unoda mumwe munhu anoziva kuti Amazon inoronga sei masangano anoshanda nehukutanga ruvovo. Ndicho chikonzero nei zvine musoro kutarisa imwe nyanzvi yekuongorora.
Chikonzero chikuru chinoita kuti vatengesi veAmazon vachitsvaga vatengesi vekutengesa vanosanganisira:
vatengesi havadi kusiya mari yavo patafura nekuda kwechikamu chemazana chemotokari inouya kwavari listing;
vatengesi havana hupo huripo kuAmazon uye vanoda kuita kuti michina yavo ionekwe nevatengi vanogona;
kana yakatovepo pama Amazon maitiro ari kutengeswa nedzimwe makambani nevatengesi;
apo vatengesi vanoziva kuti havaiti pamwe chete uye zvinogona kuva - wholesale hats and fascinators australia.
Nyaya idzi dzose dzinogona kugadziriswa. Zvisinei, iwe unoda kushandisa imwe nguva pakutsvakurudza nekutsvaga kwezvino ma Amazon mazita. Zvino iwe unoda kuvaka nhanho-nhanho yekutsvaga mushandirapamwe, kushandisa zvishandiso zvakawanda nekugadzirisa maitiro. Inoda ruzivo rwakananga uye ruzivo.
Kune mararamiro akasiyana uye ane dambudziko rekushandisa ma Amazon yako channel. Zvisinei, vose vanoburukira kumiganhu miviri yebhizimisi - nguva nemari. Iwe unoda kupedza nguva yakawedzerwa pakuvaka kambani yekudhinda iwe pachako. Ipapo iwe unofunga kuti mari yakawanda sei iwe unogona kuitisa neAmerica yakanyatsogadzirwa. Zvisinei, zvakadaro, iwe unoda kuverenga mari yakawanda iwe unogona kurasikirwa nekuda kwenguva yauri kukandira kushandisa maitiro ese ekugadzirisa ma Amazon business business. Hapana nzvimbo yepakati pakati penguva nemari kana zvasvika pakushambadzirwa kwebhizimisi. Ndicho chikonzero mabhizinesi akawanda anosarudza kuvimba nevanoshambadzira Amazon vatengesi vekutsvaga kuchengetedza nguva yavo nemari.
Muchikamu chino, tichaenda kuzokurukura zvikonzero zvikuru nei zviri nani kubatanidzwa neAmazon sales consultant pane kutarisira bhizinesi rako pachako.
Chikonzero chikuru chekubhadhara Amazon sales consultant
Nokubvumirana neAmerica muchengeti wezvokutengesa, iwe unogona kutsika chidzidzo chekudzidza
Pane zvakawanda zvinotungamira, mataturo, uye nzira dzakasiyana Mapoka ekurovedza mazano anoshandisa kubatsira kubatsira vatengi kugadzira nekugadzirisa maitiro avo muAmazon. Kunyanya kwezvirevo izvi hazvina kumbobvunzurudzwa kare. Saka, haugoni kuwana chero ruzivo rwakabatana naro paInternet. Nzira idzi dzakawanda dzinoitwa kamwe chete panguva yekugadzirisa, kana pane imwe nyaya kana chimwe chinhu chichienda. Iwe haufaniri kupinda mune tsanangudzo yemhando imwe neimwe sezvo zvose zvichaitwa kwauri. Vatengesi vako vekutengesa vachabata mabiko ose uye vanotambudza chero matambudziko akange aripo akadai semadonhwe ekudzivirira, matambudziko evatengi, kuzadzika, nezvimwe zvakadaro. Vachange vachishandisa mikana yose inobvira uye kugadzirisa zvinetso muBhu.
Professional Amazon sales consultants ichakupa ruzivo rwezvakanakisisa uye maitiro anobatsira
Vatengesi vanotarisira maAngesi mazita avo, kazhinji havana nguva yekutsvakurudza uye kubudirira kwebhizimisi sezvavari kuita zvinhu zvese zvezuva nezuva sezviitiko zvakadai sekuendesa kushanda, kutsigirwa kwevashandi nekugadzirisa zvimwe zvinhu zvechikwata. Saka, zvinogona kunge zvakaoma kugara uchikwanisa kusangana nemashambaji ose emakambani uye hurumende inobudirira. Saka, unoda munhu ari kuramba achitarisa Amazon market uye anoziva zvose kutsvaga uye PPC algorithm zvinyanzwisisiro, platform platform uye nezvimwe zvakadaro. Amazon sales consultant ichakubatsira iwe kugadzirisa bhizinesi rako kune aya ose ecommerce business novelties uye kudzivirira bhizinesi rako kubva kune chero ipi zvayo inorasikirwa uye kuisa madonhwe. Uyezve, nyanzvi yeAmazon inogona kuziva kuti izvi zvinogona kubatsira sei bhizinesi rako.
Amazon nyanzvi yekutsvaga ichakubatsira kubata Amazon business account uye inokupa nguva yekuisa pfungwa pazvinonyanya kukoshesa bhizinesi uye nenyaya dzekugadzira
Mazhinji emabhizinesi, zvikurukuru makuru, shandisa Amazon semugovera unowedzera kutengesa zvinhu zvavo. Saka, ivo vanonyanya kufunga nezvekugadzirwa kwezvinhu uye magamba ekutanga akadai sewebvu rekutsvaga kana yekutengesa kwekuchengetedza. Izvo zvakaoma kugadzirisa uye kukura zvakasiyana siyana zvekutengesa, kugovera, uye makero ekutengesa zvose panguva imwe chete. Zvisinei, iwe unofanirwa kuziva kuti kushanda bhizinesi kuAmazon kunoda nguva uye mari, dzimwe nguva kunyange zvakanyanya kudarika iwe unofanirwa kuisa kana uchishandisa bhizimusi rako rekutsvaga.
Makambani akabudirira haafaniri kumira pamararamiro kana achiuya pakushambadzirwa kwebhizimisi. Kune nguva dzose zvimwe zvitsva kuti uedze, zvimwe zvitsva zvigadziriswa zvekushandisa, zvimwe zvishanduro zvitsva kutanga, uye maitiro ekufunga. Mabhizinesi anofambira haakwanisi kumbomira kwechinguva nokuti zvinogona kutungamirira kumari kurasikirwa. Vanogara vari munzira yekuwana nzira itsva dzekutyaira kuderedza mari uye kuwedzera mari. Kubudirira kwebhizimisi ndiyo nzira inonyatsobudirira yekuendesa kuderedza mari uye inotarisa vamwe vangave vatengi. Saka, vatengesi vari kure vanofanira kugovera nguva yavo nemari yavo nekuchenjera.
Unoda kupa nguva yakawanda kune bhizinesi rekugadzira, uye kukura kwechigadzirwa kupfuura pane chigadzirwa chekudya wrestling uye kuverenga maAmerica matsva mazano. Uchishandisa sangano reAmerica rekutsvaga mazano ekubvunzurudza, iwe unogona kuisa pfungwa pazvinhu zvakakosha uye zvinokosha, asi zvimwe zvikamu zvichatungamirirwa nevashandi.
Kuunganidza, zvose zvandakambotaura pamusoro, ndinogona kutaura kuti zvinonzwisisika uye zvinodhura kubhadhara Amazon sales mutariri, kunyanya kana iwe uchitengesa zvigadzirwa zvako pamisika yakawanda. Kunyangwe iwe uri kuzovandudza Amazon yako tsvakurudzo kana kuisa puro-per-click advertising campaign, iwe uchawana zvakawanda nekushanda pamwe nevadzidzisi vane ruzivo, kupfuura kuzviita iwe pachako. Uyezve, iwe uchakwanisa kusunungura nguva yebhizimisi rako kukura nekuvandudza.